Tany etsy Antaninarenina : MANADIO TENA AMIN’ILAY VAROTRA NATAONY NY CUA -
AccueilVaovao SamihafaTany etsy Antaninarenina : MANADIO TENA AMIN’ILAY VAROTRA NATAONY NY CUA
Tany etsy Antaninarenina : MANADIO TENA AMIN’ILAY VAROTRA NATAONY NY CUA
Tsy mahay miaina. Efa hitam-poko, hitam-pirenena, ary nohamafisin’ny minisitra misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Narson Rafidimanana, fa namidin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra (CUA) sy ny Ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana, ilay tany etsy Antaninarenina antsoina hoe “Florida”.
Miezaka ny manadio tena amina haino aman-jery isan-tokony eto an-dRenivohitra anefa ny eo anivon’ny CUA fa tsy namarotra ny tany.
Tsy vendrana ary tsy kentrina akory ny vahoaka fa mahalala ny toe-java-misy ankehitriny, mikasika io tany antsoina hoe “Florida” sady zaridainam-pokonolona. Ny CUA no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanomezana sy fitsinjarana ireo taratasy fahazoan-dalana manokana ahafahana mamefy toerana sy manorina trano. Tsy misy afa-tsy izy ireo no manana fahefana mitsinjara izany ary tsy ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany velively.
Hatramin’ny androany anefa, miala ary mitady ny fomba rehetra amin’ny fanomezana vaovao diso ny teo anivon’ny CUA fa tsy namarotra ny tany izy ireo sy ny ben’ny tanàna. Mahamenatra ary mamoafady mihitsy ny zavatra ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Lasa mampiasa ny fahefana ananany sy am-pelatanany amin’ny fitadiavam-bola sy tombontsoa manokana ireo mpitantana eo anivony. Raha ny vidin’ilay tany anefa tsy dia volabe manao ahoana satria 5 tapitrisa Ar monja no nividian’ilay mpandraharaha tompona Hotely sy trano fisakafoana ny tany antsoina hoe “Florida”. Matoa anefa mbola tsy nanala ny fefy fanitso mamefy ilay tany ilay nividy sy nahazo ny tany, ny fanomezan-dalana tao. Ny CUA anefa manambara hatrany fa tsy nanome fahazoan-dalana izany. Ny M2PATE anefa tsy manana fahefana amin’izany koa saingy, efa namoaka naoty izy ireo amin’ny fanalana ny fefy sy fampitsaharana tsy misy hataka andro ny asa fanamboarana ao amin’io zaridainam-pokonolona io.
Andrasana, araka izany, ny mety ho tohin’ity raharaha varotra tany etsy Antaninarenina nataon’ny CUA ity.
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny lahateny nataony omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, nandritra ny lanonana ara-miaramila tamin’ny alalan’ny fanolorana faneva ireo jeneraly miisa 56 vao nahazo izany laharam-boninahitra izany, fa “tokony ...Tohiny